Tsipy kanetibe: tsy mety mankato ny FSBM ny minisitera | NewsMada
Tsy mbola voavaha ny olana iainan’ny taranja tsipy kanetibe, hatreto. Tsy mitondra any amin’ny fitoniana sy filaminana mantsy ny taratasy nomen’ny minisitera, fa mametraka ahiahy.
Nihaona tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Solimotel Anosy, omaly alakamisy, Randriamarohaja Dolys sy Rakotoarivelo Irma Juliette ary i Amir Moez Amidou, izay nomen’ny minisiteran’ny fanatanjahantena, taratasy fankatoavana sy fahafahana miasa, ny 9 sy ny 10 septambra, lasa teo, amin’ny fampandehanana ny tsipy kanetibe, mandra-pahatonga ny 3 febroary 2021, fe-potoana hitsaharany.
Nambaran’izy telo mianadahy, fa sanganehana tanteraka izy ireo, satria ny FSBM (Federation Sport Boule Malagasy), izay efa nitsangana tamin’ny 19 aprily lasa teo, no ilain’ny federasiona iraisam-pirenena (FIPJP), miara-miasa aminy, fa tsy tsangan’olona, araka ny taratasy nalefan’i Claude Azema, filohany, ny 11 septambra, lasa teo.
Nambaran’i Dolys, fa tsy mety mankato io FSBM io, mihitsy ny minisitera na dia efa nisy aza ny fifampiresahana, teo amin’ny roa tonta.
Miala nenina ny FIJPJP
Nohamafisin’i Irma fa efa nisy ny sazy taorian’ny tsy faneken’ny minisitera, ny FSBM, ka nahatonga ny Malagasy tsy afaka nandray anjara, tamin’ireo fifaninana samihafa toy ny Masters sy ny hafa. Na eo aza izany, mbola miala nenina ny federasiona iraisam-pirenena, ka mbola manasa an’i Madagasikara, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, ho an’ny sokajy tanora sy vehivavy, hatao any Cambodge. Ilàna valin-teny, mialoha ny 15 septambra, ho avy izao izany, ary hatao amin’ny alalan’ny FSBM.
Raha tsy mifaninana amin’io ny Malagasy dia hilatsaka ny sazy henjana satria tsy afaka miatrika ireo fiadiana ny ho tompondaka eran-tany sy afrika intsony, ao anatin’ny efa-taona. “Miankina amin’ny minisitera izany ny ho avin’ny taranja tsipy kanetibe, izany”, araka ny nolazain’i Amir.
Nangataka fihaonana amin’ny minisitra Tinoka Roberto izy ireo, saingy tsy fantatra na ho raisiny na tsia.
“Valin-teny mankarary fo no nasetrin’ny tompon’andraikitra ambony iray anay, raha mba nanazava ny ilàna ny FSBM, tao amin’ny minisitera”, hoy i Irma, namarana ny valan-dresaka.